Uyaqhubeka enkantolo umbango we-ANC eKZN | News24
Uyaqhubeka enkantolo umbango we-ANC eKZN
Pietermaritzburg – Udaba olufakwe enkantolo ngemizamo yokuba kuchithwe imiphumela yokhetho lwengqungquthela ye-ANC eKZN yangoNovemba 2015 kulindeleke luqhubeke eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ngoLwesibili.
Ikhansela le-ANC uLawrence Dube nabanye abane bamangalela i-ANC ngoMayi 2016.
Isinqumo yasigodla inkantolo ngokwedlule.
Kwabathintekayo kulolu daba kubalwa nosihlalo we-ANC esifundazweni uSihle Zikalala, yiphini lakhe uWillies Mchunu, yi-ANC qobo lwayo, yi-Electoral Institute of Southern Africa, kanye nezinye izikhulu eziphezulu ze-ANC.
OLUNYE UDABA: Utholakale egqitshwe ethuneni utolika
Kule ngqungquthela esematheni uZikalala wehlula uSenzo Mchunu kwesokuba ngusihlalo wenhlangano esifundazweni.
UZikalala wathola amatovi angu-780, uMchunu wathola angu-675, kubavoti abantu abangu-1 459 abavota.
Ngemva kwengqungquthela, ‘sekuxoshwe’ noMchunu, amalungu ayengeneme, okukholakala ukuthi ngabalandeli bakhe, bafuna ukuba ingqungquthela ithathwe njengengekho emthethweni, bekholelwa ukuthi amavoti akhwabaniswa.